Somaliland: Tirada Dhimashada iyo Dhaawaca Ka Dhashay Dagaal Ka Dhacay Buuhoodle Iyo Xukuumadda Somaliland Oo Ka Hadashay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Tirada Dhimashada iyo Dhaawaca Ka Dhashay Dagaal Ka Dhacay Buuhoodle Iyo...
Ugu yaraan Lix Ruux, ayaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyey, 8 kalena way ku dhaawacmeen dagaal Rasaas laysu adeegsaday oo shalay laba Beelood ku dhex-maray magaalada Buuhoodle ee Xarunta gobolka Cayn, waxaana dagaalkaas ka hadlay Xukuumadda Somaliland iyo Madax-dhaqameed ku baaqay in xabbadda la joojiyo.
Agaasimaha Cusbitaalka guud ee magaalada Buuhoodle Cali Yuusuf Axmed (Cali-Xukun) oo Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda VOA-da la hadlay, ayaa xaqiijiyey dhimashada Afar Ruux iyo dhaawaca Siddeed Qof oo kale, waxaana dhaawacyada lagu dawaynayaa goobaha caafimaadka ee Buuhoodle. Inkasta oo ay jiraan Warar sheegaya in dhimashadu lix Qof gaadhay, haddana Agaasimuhu afar Qof ayuu dhimashadooda xaqiijiyey.
“Illaa hadda Afar Qof waa dhinteen, Siddeed dhaawac ahna waan haynaa, dhammaan waxaannu amarnay Cusbitaalladu inay u furnaadaan oo ay Dadkaa daweeyaan, dhaawaca laba Ruux oo Qalliin lagu samaynayo ayaa ugu culus.” Sidaa ayuu yidhi Agaasime Cali-Xukun, waxaanu sheegay in dagaalku ka bilaabmay gudaha magaalada Buuhoodle Sabtidii shalay.
Wararka ka imanaya magaalada Buuhoodle, ayaa sheegaya in dagaalku ka dhashay dil dhawaan ka dhacay Buuhoodle oo Ninkii geystay uu baxsaday, isla markaana waxa jiray Sharci deegaankaa ka dhaqan-galay oo ah in Qofkii dila Qof kale loo qisaaso ama loo dilo oo la wada aaso, waxaanay Beesha Marxuumka la dilay ka soo jeeday u fahantay in Beesha Ninka dilka geystay ka soo jeeday burisay Sharcigaas oo ay ku doodayeen Beesha dilku ku dhacay in utuntooda loogu fuliyo.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Yaasiin X. Maxamuud Xiir (Faratoon) oo Shirkaa Jaraa’id ka hadlay, isla markaana Baaq u diraya dhinacyada dirirtu ku dhex-martay Buuhoodle, waxa uu yidhi; “Waxa na soo gaadhaya annaga oo joogna Laascaanood in dagaal laba beelood u dhexeeyaa uu ka qarxay magaalada Buuhoodle, illaa immika (shalay) sida warku igu soo gaadhayo dhawr Qof baa dhintay.”
Faratoon oo hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay inay aad uga xun yihiin Dhiigga daadanaya, waxaanu yidhi; “Arrintaa dagaalka aad iyo aad baannu uga xunnahay, waxaannannu ugu baaqaynaa Beelaha uu dagaalkaasi ka dhex socdo inay hakiyaan oo dagaalka joojiyaan, wixii khilaafaad ah iyo waxay isku hayaan iyo wixii dhibaato ah ee dhexyaalla loo daayo in Caqligu shaqeeyo oo laga wadahadlo.”
“Waxaannu Bulshada inteeda kale iyo Ciddii kale ee Wax-garad ah ee joogtaba ugu baaqaynaa inay dhibaatadaa hakiyaan oo ay Beelahaa kala dhex-galaan oo ay ku simaan Odayaasha, Wax-garadka iyo wixii awood haya ee arrintaas joojin kara. Waxaannu mar labaad ka codsanaynaa Dadka dhibaatadaasi ka dhex socoto inay dagaalka joojiyaan.” Sidaa ayuu yidhi Wasiir Faratoon.
Wasiir Faratoon waxa uu sheegay inay dawladda Somaliland ku dedaashay nabadda Beelaha Buuhoodle, immikana ku dedaali doonto, waxaanu yidhi; “Wax walba xal waa loo heli karaa, dawladdu in badan bay nabadgelyada aad uga shaqaysay Beesha Buuhoodle, waxay doonaysaa inay arrimeheeda oo dhan ku xallisho wadahadal, nabad iyo isu soo dhawaansho iyo kalsooni iyo in dadkeedu is-oggolaado, taas baa siyaasad u ah Somaliland, taas baanay diyaar u tahay inay kaga shaqayso Buuhoodle haddii Dadku diyaar u yihiin.”
Sidoo kale, Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Ducaale oo halkaas ka hadlay, waxa uu yidhi; “Colaaddaa soo cuboonaatay ee sida lama filaanka ah maanta (shalay) Buuhoodle uga dhacday aad baannu uga xunnahay. Waxaannu leenahay intii dhimatay Allaah ha u naxariisto inta dhaawacantayna Illaahay ha booga-dhayo.”
Garaadka iyo Xubno kale oo isla Shirkaa Jaraa’id ka hadlay, waxay ku baaqeen in nabadda wax lagu xalliyo oo wadahadal la isugu yimaaddo, lana joojiyo dagaalka iyo dhiigga daadanaya, isla markaana la fuliyo ku dhaqanka Sharciga u degsanaa Beelaha Buuhoodle ee ah in Qofkii dila Qof kale loo dilo oo dhawaanahan ka dhaqan-galay deegaannada Buuhoodle.
Wargane Tv: Aqoonyahanka beelaha shiikhaal oo taageero u muujiyay Xisbiga KULMIYE iyo Murrashaxiisa.